Ny mahafinaritra ahy @ serasera.org
2006-04-03 @ 05:15 in Blaogy Dev
Ny serasera.org, ho an'izay vaovao, dia niforona tamin'ny taona 1999 (3 oktobra izy izay). Tsy niova mihitsy ny tanjona... dia ny hanolotra fitaovana hifandraisan'ny Malagasy (mba tsy hamerenana foana ilay hoe hampiray ny Malagasy).
Fa anisan'ny zavatra mahafinaritra ahy indrindra ao amin'ny serasera dia ny tsy fisian'ny elanelana eo amin'ny mpikarakara sy ny mpampiasa ny takelaka. Ny ankamaroan'ny portail toa itony mantsy (na dia tsy vazaha aza fa tena Gasy koa) dia sarotsarotra ihany ny mifandray amin'ny mpitantana. Indraindray ianao mandefa email dia tsy voaray... na tsy voavaly. Indraindray tsy ny olona tianao hifandraisana no mamaly ny taratasinao... be protocole zany e. Fa ny serasera, na dia betsaka aza ireo mpiara-miasa... dia noezahina nofoanana mihitsy ny resaka protocole fa mpinamana daholo na dia ireo vao vaovao omaly aza... ary miara-mandray anjara manantanteraka ny tanjona.
Izany no efa fomba fiasa hatramin'izay... koa mbola izany hatrany no ho fomba fiasa. Tsy midika izany fa tsy matotra, fa toa very maina ilay tanjona hoe hampifandray raha ampitomboina ny elanelana.
Dia aza gaga ary raha mahita ahy mikivanivany ao amin'ny chat, miditra lalina amin'ny resaka ao amin'ny forum, mamaly ny hafatra tsotra dia tsora alefan'ny namana, mandefa hafatra momba ny solonifin'i bebe, tapatsinay rehefa mahita resaka mampihomehy eto amin'ny serasera. sns. Satria mba te ho namana tsotra toa ny rehetra koa aho.